Posted by တန်ခူး at 2:01 PM
ပန်းချစ်တတ်သူ အတွက် ကဗျာတပွင့် ကြွေခဲ့ပါတယ်...
discount ကြော်ငြာလောက်တောင် တန်ဖိုးမရှိခဲ့ဘူး။
ခရေလေးတွေ ဖွေးသန့် 
အဲဒါ ကြိမ်နှုန်းမတူတာပေါ့….တန်ခူးရေ။ ခံစားမှုချင်း၊ အကြိုက်ချင်း ကြိမ်နှုန်းမတူညီကြတာပေါ့။ လူတွေရဲ့ တန်ဘိုးထားတတ်တာချင်းမတူတာလို့လည်း ပြောလို့ရမယ်။
Oh!.. Gankaw, I love .
U r lucky, i cannot seen in here.
Now i gotasmell of that flower.
I brought to my place. :)
I love ..that photo.
တန်ခူးရေ နတ်ကြီးတဲ့ ကံကော်ကို လာငေးပြီး လွမ်းသွားပါတယ်။
အမ.. အပြင်မှာ ခူးခွင့်မရပေမဲ့ အမဘလော့က ကံကော်ပန်းတွေ မြတ်နိုးခူးသွားပီ။ :P
မသက်ဝေ blog က တဆင့် လာလည်ပါတယ်။
စစချင်း ကံ့ကော်ပန်းတွေ မြင်တာနဲ့ အမ blog လေးကို အရမ်းသဘောကျသွားတယ်။ ကံကော်ပန်းနံ့သင်းသင်းလေးကိုလည်း သတိရမိလိုက်တယ်။ ဓာတ်ပုံတွေ သိမ်းထားချင်လို့ ယူသွားမယ်နော်.. :)
ငယ်ငယ်က သနပ်ခါးထဲ ထည့်သွေးလိမ်းတာ အမှတ်ယသေး..
ပန်းအစစ်တွေကိုခံ စားရကောင်းမှန်းမသိတဲ့ဒေသကပ န်းဖြစ်ရတာသနားစရာ
နုရေ...ကံ့ကော်ချစ်သူတွေပေါ့နော်...။အစတည်းက လက်ဆောင်ပေးဖို့ရည်ရွယ်တာမို့ကြိုက်သလောက်ခူးသွားနော်။ လာလည်တာကျေးဇူးပါ။ စိတ်ဝင်စားစရာတွေစုံလင်တဲ့ ချယ်ရီရနံ့လေးသင်းနေတဲ့နုblogလေးကို မကြာမကြာအလည်ရောက်ပါတယ်...။တိတ်တိတ်လေးဆိုတော့ အိမ်ရှင်မကြားလိုက်တာပါ...။ နောက်နှုတ်ဆက်မယ်နော်။
အိမ့်ရေ...တပွေ့တပိုက် နိုင်သလောက်ခူးသွားနော်။ ကံ့ကော်ဆို ပန်းခြောက်ကလေးလဲမြတ်နိုးတယ်...။ အိမ့်ပြောသလို သနပ်ခါးထဲထည့်လိမ်းရင် ရနံ့လေးသင်းပြီး ခေါင်းထဲကိုကြည်ရော။
ဟုတ်တာပေါ့ပန်ရယ်...။ ပန်းအလှ၊ ပန်းဘဝကို မခံစားတတ်သူတွေကြားက ပန်းဖြစ်ရတာတကယ်သနားစရာပါ...။သစ္စာရှိတဲ့ပန်းလေးတွေကတော့ သူ့တာဝန်ကျေပြွန်စွာ ဝေလိုက်၊ကြွေလိုက်။
အလုပ်တွေများနေတာရယ် နေမကောင်းတာရယ်ပေါင်းပြီး ဘလော့ဂ်တွေဆီ မရောက်ဖြစ်တာ ရက်နဲနဲကြာသွားတယ်...။
ချစ်စရာ ကံ့ကော်ပန်းလေးတွေ တွေ့ တော့...
အင်း... လွမ်းစရာ... နော်..။